cusmaan – Page 5 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Apr 8, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Degso Dhuuxa Wareysiyada 08-04-2019
cusmaan	 Apr 6, 2019 1
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo Sabtida ka baxa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa waryasiyo iyo falanqeyno xiiso leh. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 06 04…
Waa kuma Butafaliqa Madaxweynaha is casilay ee Aljeeriya?
cusmaan	 Apr 6, 2019 0
Kadib lix todobaad oo xiriir oo ah oo shacabka Aljeeriya ay dhigayeen banaanbaxyo waaweyn, waxay ugu dambeyn ku guuleysteen iney talada ka tuuraan hogaamiyihii sanadaha badan maamulayay wadankaas ee lagu magacaabo Cabdil-caziiz…
Shisheeyaha Oo lagu Weeraray Siinka-dheer iyo Jubbooyinka.
Ciidamada Shisheeyaha ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ayaa la kulmay weeraro qaraxyo ah oo si isku mid ah ugu beegsaday duleedka Muqdisho iyo gobolka Jubbooyinka. Qarax xoogan ayaa deegaanka Siinka-dheer waxaa lagula eegtay gaari…
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa ee magaciisa loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa qirtay in duqeyn diyaaradeed oo ay diyaaradahooda ka fuliyeen bartamaha Soomaaliya ay ku dileen dad shacab ah. Africom waxay sheegtay iney…
Inkabadan 100 Askari Oo lagu dilay Howlgallo ka dhacay Afqaanistaan.
Todobaadkan dalka Afqaanistaan waxaa ka dhacay silsilado weeraro waaweyn oo lagu gumaaday malleeshiyaadka xukuumadda Kaabul ee ay shisheeyaha Maraykanku ka dhiseen wadankaas. Weerarada oo ahaa kuwa waaweyn oo si adag loo soo abaabulay,…
qeybta hoose waxaad kala degi kartaa warka subaxnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala dhagayso warka subaxnimo 06 04 2019
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 29-07-1440
cusmaan	 Apr 5, 2019 0
cusmaan	 Apr 4, 2019 0
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen weliba marka laga reebo Sabtida ka baxa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa waryasiyo iyo falanqeyno xiiso leh Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 04 04 2019
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Al-Shabaab oo sheegtay.
Fiidki caawa, qarax aad u culus ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaas oo lagu weeraray saraakiil katirsan ciidamada Police-ka iyo kuwa Ammaanka ee dowladda federaalka. Qaraxa oo si weyn looga maqlay qeybo badan oo…